Tilmaamyada ay dadku u isticmaalaan warshadaha ayaa ku wareeri kara. Haddii aad ka hadlayso ku calaamadeynta qoraalka, waxaad u maleyneysaa inaad xulanayso ereyo muhiim u ah maqaalka si aad u calaamadeyso oo ay u sahlanaato raadinta iyo helitaankeeda. Maaraynta Tag waa farsamo iyo xallin gebi ahaanba ka duwan. Fikradayda, waxaan u maleynayaa in si liidata loo magacaabay… laakiin waxay noqotay ereyga guud ee warshadaha oo dhan sidaa darteed waan kuu sharixi doonaa! Waa maxay Tag Tag? Calaamadeynta